Laba Maxbuus oo Warqad hadal heyn abuurtay ku reebay Xabsi ay ka baxsadeen !! | Dhexnimo Media
Home Wararka Laba Maxbuus oo Warqad hadal heyn abuurtay ku reebay Xabsi ay ka...
Laba Maxbuus oo Warqad hadal heyn abuurtay ku reebay Xabsi ay ka baxsadeen !!
Saxaafadda Talyaaniga ayaa aad u hadal heysa sheekada laba maxbuus oo ku xidhnaa jeelka Rebibbia kuwaas oo – kahor inta aanay ka baxsan xabsiga – ku dhaafay warqad ay ku muujinayaan sababta ay u baxsanayaan. Waxay sidoo kale balanqaadeen inay kusoo laaban doonaan laba toddobaad kaddib.
Previous articleAxmed Madoobe oo sheegay in maamul goboleedyada aysan go’aan ka gaadhi karin arimo badan
Next articleJilaaga Caanka ah ee Amitabh Bachchan iyo xubno katirsan Qoyskiisa oo isbitaal la dhigay